Ikamelo Lasehlane Elipendiwe - I-Airbnb
Ikamelo Lasehlane Elipendiwe
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Marc
Ikamelo elihlukile & izindawo ezihlanganyelwayo ezine-patio enkulu yomlilo. Zizwe usekhaya...yenza into yakho noma uhlangane/udle nezinye Izivakashi endaweni 'yasehostela' ekhululekile. Umbungazi uhlala efulethini le-studio elihambisanayo. Ama-comons ezivakashi ayahlanzwa nsuku zonke. Ukuhlobisa nempahla kugxile ezivakashini, kuhlelelwe wena ngokuphelele! Amapaki omgwaqo ohamba ngemoto izimoto ezingu-3-4 + nokupaka okulula emgwaqweni. Izindawo ezizungeze amadolobha amakhulu zinamapaki angu-2 - 2 imiz ukuhamba ngezinyawo ukuya e-Rec Center (isisindo $ 2 Mon-Fri) & 10 imiz ukushayela ukuya e-Downtown noma e-UofA, & Tucson Bikepath kugijima khona manje!
Leli Ikamelo Lasehlane Elipendiwe. Ukuhlobisa okuthakazelisayo akukwazi ukunquma ukuthi kuyincomo yini ku-Painted Desert yase-Arizona noma mhlawumbe omunye nje wezintandokazi zabahlali base-Arizona! Umbhede olala abantu ababili ontofontofo ulala abantu ababili, i-dresser yekhekhe nendawo ye-closet, ideski elinemibala egqamile, kanye nesikhiye sokukhiya umnyango wakho. Enye indlu ingeyakho ukuze uyisebenzise, nakanjani. Cabanga ngayo yonke indlu nengadi njengehostela elijwayelekile nelinobungane! Ungapheka ekhishini elinakho konke okudingekayo, uphuze emphemeni egcekeni elisakhula, ulalele umsakazo wendawo etafuleni lakudala le-KLH elisethwe ngetafula lokudlela noma ubuke i-TV noma i-Netflix egumbini lokuphumula. Sebenzisa umtapo wethu ohlanganyelwayo wezincwadi zokuhamba zasendaweni noma ufunde amabalazwe endawo ezindongeni kuyo yonke indlu enomthelela wezivakashi. Ngobusuku obubandayo zizwe ukhululekile ukuma umlilo kwi-avocado-luhlaza i-Malm ezimele indawo yomlilo ngemuva, ezungezwe izintambo zezibani ezifudumele ze-porch - noma mhlawumbe uhlanganyele isidlo noma ingxoxo nesivakashi esisebenza naso!
Ngendlela, nginikeza amanye amakamelo amabili kule ndlu: i-Great Sage Room, ne-Painted Desert Room. Ukuze ubone lezi zinketho kanye nenani lazo, chofoza isithombe sami Sombungazi kuleli khasi.
Indawo esihlala kuyo ihlangana ngqo namapaki amabili amakhulu alungele ukuhamba ngezinyawo noma ukuhamba ngebhayisikili: I-Golf Links Sports Complex inezinkundla zokudlala kanye nengxenye ye-Tucson Metro Bike Loop, kuyilapho i-Freedom Park ngasentshonalanga isingatha i-Parks & Recreation Centre entsha (3 imizuzu yokuhamba ngezinyawo). ) lapho ukufinyelela kwegumbi lesisindo kungu-$2 kuphela ukusetshenziswa ngoMsombuluko-Lwesithathu. Umtapo wolwazi wendawo ungaphakathi kwebanga elingamamayela angu-1.5, njengoba kunezindawo eziningi zokuthenga nezindawo zokudlela.
Indlu ingase ibe nezinye Izivakashi noma ingabi nazo ngesikhathi uhlala (ngikunikeza amagumbi amathathu ewonke), kodwa cishe uzohlangana nami ngesinye isikhathi. Ngihlala esitudiyo esixhumene ngaphandle nje kwenkundla enkulu. Kungaba mina, umlingani wami, noma umsizi wami ngezikhathi ezithile uzohlola izici ezahlukahlukene zendlu nsuku zonke ukuze abone ukuthi unakho konke okudingayo noma ongakufuna. Uma singasiza ukwenza ukuhlala kwakho kukhululeke kakhulu nganoma iyiphi indlela, vele ubuze!
Indlu ingase ibe nezinye Izivakashi noma ingabi nazo ngesikhathi uhlala (ngikunikeza amagumbi amathathu ewonke), kodwa cishe uzohlangana nami ngesinye isikhathi. Ngihlala esitudiyo…